ခပ်ချေချေအမှုအရာလေးနဲ့ Colour တွေထဲမှာ သူမအကြိုက်ဆုံး နဲ့ အရှုးသွပ်ဆုံး အ‌ရောင်ကဘာလည်း လို့မေးလာတဲ့ ‘ဂုဏ်ရှိန်ဝင့်ထည်’ – Shwe Naung
ခပ်ချေချေအမှုအရာလေးနဲ့ Colour တွေထဲမှာ သူမအကြိုက်ဆုံး နဲ့ အရှုးသွပ်ဆုံး အ‌ရောင်ကဘာလည်း လို့မေးလာတဲ့ ‘ဂုဏ်ရှိန်ဝင့်ထည်’
ပရိသတ်ကြီးရေ သွယ်လျတဲ့ အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ်လေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ဆက်ဆီမော်ဒယ် ဂုဏ်ရှိန်ဝင့်ထည် ကို သိကြမယ်ထ င်ပါတယ်။
ဆွဲမက်ဖွယ် ရင်သပ်ရှုမောစရာ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေး တွေနဲ့ ချစ် ပုရိသတွေရဲ့ ရင်ကို ဆွဲဆောင်ညို့ယူထားတဲ့ အလန်းစား မော်ဒယ် သရုပ်ဆောင်လေးဖြစ်ပါတယ်။
သွယ်လျ ပြေပြစ်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ် နဲ့အတူ လှပ ကြည်လင်တဲ့ အသားအရေ ကိုပါ ပိုင်ဆိုင် ထား ပြီး သူမရဲ့ အမိုက်စားပုံတွေနဲ့ ညို့အားပြင်းပြင်း ဆွဲဆောင်နိုင် သူလေးလ ည်းဖြစ်ပါတယ်။
သူမရဲ့ အမိုက်စားပုံရိပ်နဲ့ အင်တာဗျူးများစွာကိုလည်း လူမှုကွန်ယက်ဖေ့ဘွတ်ပေါ်တွင် အများဆုံးတင်လေ့ရှိတာ လည်းတွေ့ရပါတယ်။
လတ်တလောမှာတော့ သူမ ရဲ့ အမိုက်စား အလှတရားတွေနဲ့ ညို့ယူဖမ်းစားထားတဲ့ အလန်းစား ပုံလေး ကိုဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ပုံလေးဟာ ကြည့်ရှုသူတွေ များပြား ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ပုရိသတွေ အများဆုံး ဝန်းရံခြင်းခံနေရတာ လည်းဖြစ်ပါတယ်။
ယခု အခါမှာဗတာ့ သူမက ပုံလေး ထဲမှာ ဆွဲဆောင် မှုမှုရှိရှိနဲ့ လှရက်လွန်းနေပြီး ပုံတွေကို ပရိသတ်ကြီးကို အတွက် တင်ပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ် ။သူမကတော့ ခပ်ချေချ ရိုက်ထားတဲ့ ပုံလေးကို “ရှိန်ရှိန့် ရဲ့ Favourite colour ကဘာအရောင်ဖြစ်မလဲ??? လေး ” caption လေးတဲ့ တင်ပေးလာ တာပဲဖြစ်တယ်။
သူမရဲ့ အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ်အလှကတော့ မြင်သူတိုင်း ငေးလောက်အောင် ကို ညို့ယူဖမ်းစားနေတာ အမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ချစ်ပရိသတ်ကြီးလည်း ဝင့်ထည် ရဲ့ အမိုက်စား ပုံလေးကို ကြည့်ရှုနိုင်စေ ရန်ဖော်ပြ ပေးလိုက်ပါတယ်။
ချစ်ပရိသတ်ကြီးရေ သွယ်လျတဲ့ အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ်လေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ဆက်ဆီမော်ဒယ် ဂုဏ်ရှိန်ဝင့်ထည် ကို သိကြမယ်ထ င်ပါတယ်။
လတ်တလောမှာတော့ သူမ ရဲ့ အမိုက်စား အလှတရားတွေနဲ့ ညို့ယူဖမ်းစားထားတဲ့ အလန်းစား ပုံလေး ကိုဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ပုံလေးဟာ ကြည့်ရှုသူ တွေများပြား ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ပုရိသတွေ အများဆုံး ဝန်းရံခြင်းခံနေရတာ လည်းဖြစ်ပါတယ်။
သူမရဲ့ အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ်အလှကတော့ မြင်သူတိုင်း ငေးလောက်အောင် ကို ညို့ယူဖမ်းစားနေတာ အမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ချစ်ပရိသတ်ကြီးလည်း ဝင့်ထည် ရဲ့ အမိုက်စား ပုံလေးကို ကြည့်ရှုနိုင်စေ ရန်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
အပြီးတိုင် နှုတ်ဆက်ထွက်ခွာ သွားတဲ့ ပန်ချီဆရာ ဇူလိုင်လ(၃၀)ရက်နေ့မှာ ကွယ်လွန် သွားတဲ့ သရုပ်ဆောင် တစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးခိုင်တင်….
ဆွဲ‌ဆောင်မှုရှိတဲ့ မျက်နှာလေးနဲ့ အမိုက်စား ကောက်ကြောင်းကို ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ ယွန်းမီမီကျော်ရဲ့ အလန်းစား ပုံရိပ်လေးများ………